Namibian Tourism Ministry inoshambadza kuuraya kunopokana kwenzou dzemugwenga
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Namibian Tourism Ministry inoshambadza kuuraya kunopokana kwenzou dzemugwenga
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Namibia Breaking News • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Nzombe mbiri pane shanu chete dzakasara dzakakura dzenzou dzemurenje dzaigara mudunhu reUgab kuNamibia dzakavhimwa nekuurayiwa nguva pfupi yadarika.
Tsaurab naTusky, pamwe neimwe nzombe yevechidiki, Kambonde, vakapfurwa vari pakati pekuchema kwenyika uye zvikumbiro zvakaenderera zvichizama kumisa kuuraya uku - mheremhere yakabviswa neNamibia Ministry of Environment & Tourism (MET) se "nhema uye kusanzwisisa pamusoro pekubvumidzwa kwemvumo yekuparadza mhuka dzinokonzeresa matambudziko, ”achitaurawo kuti kuuraya mhuka inokonzeresa" kazhinji ndiyo nzira yekupedzisira mushure mekunge dzimwe nzira dzaedzwa. "
Zvisinei, nekuurawa kwaKambonde, kunofungidzirwa kuti imhuka inokonzeresa, hazvina kudaro.
Kuuraya zvisina hunhu
Sekureva kwemwanasikana wemuridzi wepfuma yakapfurwa Kambonde, varidzi venyika nevanhu veko vakaedza kununura nzou. "Takashanda nesimba kuti tibudise nzou iyi, asi Hurumende yakaramba kupa mvumo."
Pane kudaro, mvumo yekuvhima yakapihwa neMET. Asi pazuva rekuuraya, muvhimi akaramba kuenderera mberi nekuuraya nekuti Kambonde ane makore gumi nemasere aive mudiki. Panzvimbo iyoyo, muvhimi akapihwa mvumo yekuvhima mukombe wekupedzisira-miniti yekupfura Tsaurab, nzou yemurenje inonyatso kuzivikanwa nehunhu hwake hwakapfava uye hunyoro uye imwe chete yevechidiki vaviri vanoberekesa nzombe vakuru mudunhu iri.
Zuva rakatevera, MET yakaraira kuurawa kwaKambonde zvakadaro. Uye, sekureva kwenharaunda yemutambo muchengeti muSorris Sorris Conservancy, kufa kwemhuka kwaive kuteura ropa. “Nzou yaifanirwa kupfurwa kasere mushure mekunge muvhimi achingoikuvadza nepfuti yekutanga. Mutariri weMET aivapo pakuvhima aifanira kuisa coup de grâce, ”kana kuti mercy kill.
Sekutaura kwemutauriri weMET, Romeo Muyunda, mhuka dzinonetsa dzinowanzotumirwa kunze kuti dziurawe nevanobhadhara, sezvakaitika kuna Kambonde.
Voortrekker, bhuru rine mukurumbira rine makore makumi mana nemashanu, Bennie ane makore makumi matatu nemashanu uye Cheeky ane makore makumi maviri nemashanu ikozvino ndidzo chete nzombe dzezera rekubereka rasara mudunhu iri.
Tsaurab mu Africa
Nei uchiuraya nzou dzemusango dzisingawanzoitika?
Kutevera kuvhima, MET inovimbisa "vateveri vese vekunze" kuti "vakagadzira mapuratifomu anokurudzira nharaunda kuti dzigare pamwe nemhuka dzesango". Sezvazviri pachena mune zvakaitika kuna Kambonde, zvisinei, hapana "kubatana-kurarama" kuyedza kunoratidzika kunge kwakatariswa, kunyangwe sarudzo yekutamisa yakaiswa pamberi nharaunda pachayo.
Hapana mhinduro yakagamuchirwa kune tsamba uye gwaro rakazara rekutsvagisa rakaiswa pamwe nevane chekuita, kusanganisira Elephant Human Relations Aid (EHRA), chero. Gwaro netsamba iyi, yakawanikwa kuburikidza ne lodge munzvimbo yakatora chikamu muongororo iyi, yakanyorerwa zvakananga kuna Gurukota rezveMamiriro ekunze neKushanya, Pohamba Shifeta ndokutsanangura mamiriro ekuchengetedza, kuparara kwevanhu, kukosha kwemari, kukosha kwezvakatipoteredza nemikana yebasa yakakomberedza nzou dzemugwenga.
Kusada kweMET kufunga dzimwe nzira dzekutarisana nemhuka dzinokonzeresa zvinokanganisa nekushaikwa kwenzvimbo yekutarisa zviri pamutemo iyo inosimbisa kana mhuka iri kubvunzwa iri "kukonzera matambudziko," uye kana kuuraya kwayo iri nzira yekupedzisira. Sekureva kwePasi Sangano Namibia, MET inogona kuona chero mhuka yemusango "mhuka ine dambudziko."
Izvi zvinokonzeresa fungidziro pakati pevachengetedza, avo vanoti MET iri kutaurwa nevekunze vanobatsira uye vanobatsira, senge Dallas Safari Club (DSC) Foundation iyo yaifambisa kuvhima chipembere nhema muna 2013 muNamibia.
Kunyangwe kukonzeresa kwakakonzerwa nekuvhima kwambotaurwa, MET yeNamibia neboka rekuvhima mukombe reU.S. DSC kutanga kwegore rino vakasaina Memorandum of Understanding yakanangana ne "kusimudzira" kuvhima kwekuchengetedza kweNamibia nekubvumira kirabhu yevavhimi kuti ibatsire nekutengesa kubva kune "yekare" yenyika. ”Zvipembere, pakati pezvimwe zvinangwa zvekuvhima.
Kuramba nzou dzerenje
MET inoenderera nekururamisa kuurayiwa kwenzou dzerenje kuburikidza nekuvhima mukombe nekuramba kuvapo kwemhuka dzakashandurwa zvachose. MunaGunyana, Muyunda akaudza The Namibian kuti hakuna chinhu chinonzi nzou yemugwenga. Anoti tsananguro iyi "chishandiso chekushambadzira chevashanyi kana vezvokuchengetedza vaine chinangwa chekuda kuisa panjodzi kana kutsakatika kwenzou dziya."
Sayenzi, kutsvagurudzwa nevezera rako kunoratidza zvimwe. Chidzidzo chakaburitswa muEcology neEvolution muna 2016 hachina kungowana chete kuti nzou dzemugwenga reNamib dzainge dzakasiyana nehama dzadzo dzeSavanna, asi kuti magadzirirwo avo haana kuendeswa kuchizvarwa chinotevera, asi kuburikidza nekupfuudza ruzivo. Misiyano yemarphological, senge yakagadziriswa miviri yenzou dzakaonda uye tsoka dzakafara, zvakare inosiyanisa kubva kune chaiwo maSavanna Elephants, ayo MET anozviti ivo.
Chirevo chegore cheEHRA chegore ra2016 chakaratidzawo kuti 62 chete nzou dzakagadziriswa mugwenga dzakasara mudunhu reUgab neHuab. Ukuwo Muyunda anoti nzou dzeNamibia hadzisi panjodzi zvachose.
Kunyangwe MET ichiti inofunga nezve "zvese zvinoenderana nesainzi uye nekutsvagisa painopa mvumo yekuvhima chero mhuka," kuyedza kuwana "sainzi nekutsvagisa" kwakadaro kwakatariswa.